Beyou waxaa ka go'an cilmi-baarista iyo horumarinta wax-soo-saarka khayaanada, adeegga hal-joogga ah!
PA6+ Fiber Kaarboon Dheer
1.Control by PLC, shaashadda taabashada hal-gujin hawlgal, fudud oo lagu kalsoonaan karo.
2.Salamyada iyo kaalmooyinka leh agab heer-sarre leh oo adkaysi u leh nolosha muddada dheer.
3.Three noocyada kala duwan ee xeerka, sida daab farsamo hagaajiyay, pneumatic daab hagaajiyey daab iyo hydraulic- pneumatic daab hagaajiyey.
4. Qaab -dhismeedka goynta goonida ah, si sax ah u hagaaji kala -goynta u dhexaysa gooyaha iyo shaxanka si hawlgalku u noqdo mid xasilloon.
1.Polymer si buuxda ayaa loo qasan yahay. 2.Waqtiga deganaanshaha dhalaalid si fiican ayaa loo kordhiyaa. 3.Qalabka hawo -mareenka oo si gaar ah loo naqshadeeyay ayaa ka hortagi kara dib -u -soo -noqoshada qayb ahaan waxayna fududayn kartaa nadiifinta dhuumaha dhuumaha. Xakamaynta heerkulka saxda ah waxay yareysaa dheef -shiidka. 5.Ku habee hababka kala -goynta kala duwan ee agabyada kala duwan. 6.Melt xawaaraha dib -u -dhalashada dusha sare waa dhakhso. 7.Qayb ka mid ah walxaha aan degenayn oo kala firdhay ayaa dib loo warshadayn karaa oo dib loo isticmaali karaa. Daaweynta kadib ee falcelinta polymerization-ku waa ...
1. Extruder screw mataanaha yar ayaa loo adeegsadaa tijaabinta waxqabadka asaasiga ah ee walxaha, sida midabka, balaastigga.
2. Extruder twin screw mataro yar ayaa loo adeegsadaa horumarinta qoondaynta cusub.
1.CTS-H taxanaha waxaa lagu qalabeeyay sanduuqa soo dejinta iyo xajinta amniga.
2.Qeybta wax -qabadku waa naqshad dhisme qaybsan, waxay leeyihiin qalliin dabacsan ee isku -darka iyo fidinta.
3. Wax-qabadkoodu aad ayuu u sarreeyaa, tayada ayaa la isku haleyn karaa, marka la barbardhigo badeecadaha heer-sare ee shisheeye, baadi-gooyuhu wuxuu leeyahay faa iido qiimo wanaagsan leh iyo adeeg ka dib iibinta kaamil ah.
Qalabaynta Caadiga ah：
1. Hoos -u -dhigidda, is -dhexgalka qaybinta torque, naqshad qaab -dhismeed cusub, dariiqa badbaadada oo la xoojiyay, saxsanaanta dusha ilkaha oo aad u sarraysa, sahayda dibadda laga soo dhoofiyo iyo shaabadaha, nidaamka qaboojinta saliidda ee qasabka ah ee qasabka ah iyo ikhtiyaarka ammaanka eber ee la soo dejiyey;
2. Jirka mashiinku wuxuu qaataa naqshada la xoojiyay;
3. Habka kontoroolka otomaatiga ah ee elektaroonigga ah waa aaladda sare ee la soo waarido ama nidaamka shaashadda taabashada, qeybaha koontaroolkeeda ugu weyni waxay qaataan summadaha la soo waarido;
4. Foostooyinka, walxaha fur iyo sanduuqyada marsho ee soo -saaraha ugu weyn waxaa soo saaray CNC machining center.
CTS-D Taxanaha Twin Ku marooji Extruder
Taxanaha 1.CTS-D waxaa lagu qalabeeyay sanduuq aad u sarreeya, xawaaraha Rotary wuxuu gaari karaa 800 RPM.
2.Qalabyada kala duwan ee foostada iyo walxaha fur ayaa la dooran karaa.
3.Qaybta ka shaqaynta L/D waxay noqon kartaa 24 ilaa 64.
4. Heerkulka foostada oo si madaxbanaan loo xakameeyo, waxaa mudnaanta la siiyaa xakamaynta PLC.
Qalabka wax-qabadka sarreeya wuxuu ka caawiyaa macaamiisha inay si dhakhso leh u soo noqdaan
Taxanaha CTS-CD Twin Ku marooji Extruder
Taxanaha CTS-CD laba-marxalad-dheereye isku-darka isku-darka wuxuu ka koobnaa laba qaybood.
1. Marxaladda koowaad waa isbarbar-dhige isku-shaandheyn-ka-bixiyaha mataanaha-ku-habboon oo leh shaqo isku-dhafan oo ku filan si loo xaqiijiyo balaastikada, isku-darka iyo isugeynta maaddada, mana jirto dib-u-celin cadaadis madaxa ah, si loo gaaro isku-darka ugu fiican xaaladda alaabta.
2.Waxaa marxaladda labaad waa extruder hal-fur la wareeg oo xawaare hooseeyo, kaas oo gaari kara extrusion ee dahaarka wax iyo fogaado kala daatay ee processing kululaado. Marka lagu daro waayo -aragnimo naqshadeysan oo awood leh, waxay leedahay mashiin wax -soo -saar oo nooc gaar ah oo cusub oo qaab -dhismeedka mashiinka ah iyo walxaha boorsooyinka.
Qalabka quudinta ama quudiyaha ayaa ah aalad hubin karta quudinta joogtada ah iyo midabka ah ee alaabta, taas oo ku habboon dhammaan noocyada walxaha, boodhka, wax lagu daro, kaabayaasha iyo wixii la mid ah. Marka loo eego shuruudaha kala duwan ee saxnaanta quudinta, quudiyaha ayaa loo qaybin karaa quudiyaha mugga iyo luminta miisaanka quudiyaha. Marka loo eego heerka qulqulka walxaha, quudiyaha ayaa sidoo kale loo qaybin karaa quudiyaha maaskaro mataano iyo quudiyaha hal fur. Xaaladda ku jirta in cufnaanta xirxirida lamaanaha ...